Horseed oo la soo wareegtay labo ciyaaryahan oo khadka dhexe ah %
Horseed oo la soo wareegtay labo ciyaaryahan oo khadka dhexe ah
By Badrudiin Mohamed	 Last updated Mar 7, 2020
Kooxda kubadda cagta Horseed ayaa la soo wareegtay xiddigaha kala ah; Axmed Xasan Macaani iyo Cabdikariin Qubaaye, kuwaas oo ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee ka dheela khadka dhexe.
Labadan xiddigan ayaa horey waxay ugu soo ciyaareen si wadajir ah naadiga Dekedda, iyagoo kula soo guuleystay horyaalka Somali Premier League, balse safar dibadda ah ayey ku maqnaayeen muddo dheer, kaddib naadiga Horseed ayaa wada xaajood la sameysay taasoo keentay inay dib ugu soo celiso dalka iyo horyaalka Somali Premier League.
Axmed Xasan Macaani ayaa dhowr kooxood horay ugu soo ciyaaray, waxaana ka mid ah; Saxafi FC, Elman FC iyo Dekedda, isagoo kooxda Dekedda la qaaday horyaalka Somali Premier league.
Macaani ayaa kooxda Horseed wuxuu uga soo biiray naadiga Elman, taasoo qandaraaskii uu kula joogay ka dhacay, waxayna Horseed ka faa’ideysatay adeegga xiddigan.
Cabdikariin Qubaaye ayaa muddo dheer la joogay kooxda kubadda cagta Dekedda, isagoo, waqti qurux badan la qaatay naadigan, si la mid ah waa kooxda kaliya uu xiddigan u ciyaaray xirafadiisa heerka sare ciyaaraha.
Labadan xiddig ayaa markale khadka dhexe ku midoobi doona, iyado hore ugu wada ciyaari jiray kooxda Dekedda, balse wareegga labaad ee horyaalka waxay u dagaalami doonaan naadiga Horseed.
Kooxda kubadda cagta Horseed ayaa muddo dheer ugu dambeeysay inay ku guuleysato horyaalka dalka, waxayna sanadkan rabaan inay gacanta ku dhigan horyaalka maadaama ay la soo saxiixdeen xiddigo garanaya sida loogu guuleysto horyaalka dalka.
Xiddigahan ayaa loo kala dhiibay lambarada kala ah 28-aad oo uu xiran doono Qubaaye halka Macaani loo dhiibay lambarka 29-aad ee kooxda, waxayna ku dheeli doonan ilaa iyo dhammaadka xili ciyaareedkan.
Si kastaba ha ahaatee, ciyaartooydan cusub ee ay la soo saxiixatay kooxda Horseed ayaa lagu wadaa inay ka soo muuqdan kulan ay kooxda Horseed la dheeli doonto wiilasha Mogadishu City Club, ciyaar dhici doonta 13-ka bishaan kana tirsan horyaalka Somali Premier League.
Aragtidaada waa muhiim
Shaxda Isku Dhafka Ah Ee Man United Vs Man City Kulanka Adag Ee Garoonka Old Trafford
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Liverpool iyo Bournemouth ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay